Igwe ndọta, Ngwa Rotary, Cylinder Bipụta - Teresa
Mgbanwe Ọnwụ Na-agbanwe agbanwe
Roba roller uru na ngwa
Caisheng na-akwado eriri igwe
Igwe eji agbanye mmiri
Weigang PS Press ink roba
Zonten PS Press ink roba roller
Bipụta Mpempe Cylinder
Igwe na-egbu egbu Rotary
Nkwa mmesi obi ike
T eresa Import and Export Trade Co., Ltd nke dị na China, na-ahụ maka ọkaibe n'ịmepụta ngwa ọrụ Rotary. Teresa ewepụtala ngwa ọrụ ngwa ngwa dị iche iche wee rụọ ọrụ na mpaghara ntụgharị weebụ dị warara na Eshia Pacific. N'ime afọ abụọ gara aga, ụlọ ọrụ ahụ weputara ihe ndị dị na ya Magnet Cylinder, ihe ndọta, Mbipụta Cylinder, Bipụta Cylinder Shaft, Ceramic Anilox Roll, Anvil Roll, Wepụ Elekere, Rotary Die cut Station, Solid Die, Gap Master ma nye usoro ịkpụzi arụzi ngwaahịa na ahịa China na Asia Pacific. Ndi ahia ya amara ndi ahia ya na oru ya. Teresa na-agbaso ụkpụrụ “onye ahịa mbụ, tupu ya abịa, ihe ọhụrụ” na-enye ndị ahịa ezigbo ọrụ.
AP ARETA APỌTA APỌRỌ
Teresa Import and Export Trade Co., Ltd nke dị na China, na-ahụ maka ọmarịcha igwe na-arụpụta ngwa ọrụ rotary. Teresa ewepụtarala onwe ya ịnye ụlọ ọrụ dị iche iche na - emegharị weebụ na Eshia Pacific mpaghara dị iche iche nke tụgharịrị ngwa ngwa dịgasị iche iche.
Usoro ndozi elu nke igwe igwe eji ebi akwụkwọ
Mimaki laghachiri na ihe ngosi n'ime mmadụ na LUXE PACK 2021 Mimaki ga-akpali ndị ọbịa na LUXE PACK nwere ọtụtụ ihe atụ nke nkwakọ ngwaahịa dị elu maka ịchọ mma, ihe na-esi ísì ụtọ na ụlọ ọrụ okomoko ndị ọzọ.
Ihe kpatara agba ji bụrụ ihe nchịkwa
ỌR IMKA SHAANXI TERESA NA ORTBPR TR PBARA, LTD.
Ngwaahịa egosipụtara - Sitemap - Mobile Site
Stack Flexo Printing Machine , Efere Anilox Onye na- , igwe nhicha nhicha Ultralona , Efere Anilox ala N'ihi na Mbipụta akwụkwọ , ngwaahịa niile.